HomeWararka Ciyaaraha MaantaTababaraha Liverpool Jorgen Klopp oo sheegay in kooxdiisu qeyb ka tahay kooxaha ku tartamaya booska Loogu soo baxo champions league.
May 9, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska 0
Macalinka kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa sheegay in kooxdiisa ay qeyb ka tahay afarta koox ee ku dagaalamayaan usoo bixistooda koobka champions league xilli ciyaareedka dambe ka dib guushii ay ka gaareen Southampton sabtidii laakiin wuxuu rumeysan yahay inay tahay inay guuleystaan dhamaan kulamadooda haray si ay halkaas u gaaraan.
barbaro ay la galeen Leeds iyo Newcastle ayaa dhalisay fursadii Reds ee ka qeyb galka shaki weyn uu galo laakiin waxa ay 2-0 kaga badiyeen kooxda Saints taasoo keentay inay ka saramayaan kooxda Tottenham isla markaana soo tiigsadaan kaalinta lixaad.
Iyadoo Spurs iyo Leicester ay labadaba guuldarro soo gaartay isbuucaan, waxay la micno tahay in Liverpool ay fadhido kaalinta Lixaad kaliya lix dhibcood ayeey ka hooseeyaan kooxda afaraad ku jirto ee Leicester city isla markaana ay ciyaari doonaan kulankii ka baaqday ee ay la ciyaari doonaan Manchester United khamiista.
Ka dib kulankaas Derbiga ah waxaa u hari doonaan kulamada West Brom, Burnley iyo Crystal Palace halka Leicester city ay u dhiman yihiin United, Chelsea iyo Spurs Iyadoo taas maskaxda lagu hayo Klopp wuxuu dareemayaa in afar guul ay ku filnaan doonto inuu Reds geeyo booska Champions League xilli ciyaareedka soo socda.